GNU / Linux sy Gambas3 mandeha amin'ny Windows | Avy amin'ny Linux
jsbsan | | Tutorials / Manuals / Tips
Ity lahatsoratra ity dia natao ho an'ny olona vao manomboka GNU / Linux efa fandaharana miaraka amin'ny Prawns3
Fanontaniana maro no nanontaniana ahy raha azo tanterahina izany Prawns3 ary ireo programa izay vita amin'ity fiteny ity ao amin'ny Windows Operating System (XP, 7, na 8).
Raha ny tena izy dia TSY AZONAO, satria Gambas3 dia tsy cross-platform ary tsy mamorona rakitra .exe izay ampiasain'ny Windows OS.
FA MISY TRICK, hanaovana azy. Ny momba ny famoronana masinina virtoaly miaraka amin'ny programa Virtualbox, izay programa maimaimpoana ary azonao atao ny misintona azy amin'ny ity rohy ity
Ity "fikafika" ity dia tsy ho an'ny Gambas3 ihany, fa ho an'ny programa rehetra izay mampiasa GNU / Linux. Raha ny tena izy, dia mety ho fomba tsara hijerena ny GNU / Linux, raha tsy matahotra ny hametaka ny fizarazarana, very "antoka", sns ...
Tsy sarotra ny fizotrany, fa efa nanao horonan-tsary aho taloha izay nanazava ny fomba hanaovana azy "tsikelikely":
Efa taloha ny horonantsary ary miresaka momba ny Ubuntu 10.04 aho. 32 sombina. Mahita kinova maoderina bebe kokoa amin'ity fizarana ity ianao izao. Tsy voatery ho Ubuntu koa izany, azonao atao ny mametraka fizarana GNU / Linux hafa (fa ny iray kosa 32-bit).
Manoro hevitra ny hampiasa aho PicarOS PicarOS «Diego», izao dia efa Prawns3 napetraka mialoha, izay mahavonjy anao tsy maintsy mametraka azy.
Fepetra takiana amin'ny solosaina:
Miankina amin'ny kinova amin'ny Windows OS izay napetrakao, sy ny fizarana GNU / Linux tianao hapetraka ao amin'ny masininao virtoaly, dia hiankina ny fahatsiarovana RAM sy ny haben'ny kapila virtoaly ilainao. Raha farafaharatsiny farafaharatsiny dia tsy maintsy manana solosaina "ara-batana" ianao izay manana RAM farafahakeliny 2 GB.
Torohevitra farany iray: ny fomba tena hanararaotanao ny solosainao sy ny rafitra fiasan'ny GNU / Linux dia amin'ny alàlan'ny fizarazarana ny kapila mafy ara-batana anao ary fametrahana GNU / Linux amin'ny solo-sainao mivantana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » GNU / Linux ary Gambas3 mandeha amin'ny Windows
Adala loatra hoy aho, fa hay, mety hisy hiteny.
hadalana? Tsy misy lehilahy, mazava be ny mijery ilay horonantsary. (misy fanazavana bebe kokoa amin'ny Internet)
Manana tombony maro izy io:
- Mety tsara ho an'ireo mpampiasa vao manomboka, izay te hanandrana tsy misy risika.
- Raha manao fahadisoana ianao dia tsy misy zavatra mitranga dia tsy hanimba ny rafitry ny baotinao ianao.
- Tsy mila matahotra ianao hoe "very ny garantie de solosainao"
- Afaka manandrana distro gnu / linux maromaro ianao alohan'ny hametrahana ilay tianao indrindra.
Na dia ny zavatra tsara indrindra aza dia ampiasao gnu / linux napetraka mivantana ao anaty kapila mangatsiakao, satria amin'izay dia handeha haingana kokoa ny zava-drehetra.
Tsy haiko, fa toa adala amiko ny mametraka VirtualBox avy eo misintona distro GNU / Linux hampiasa Gambas amin'ny Windows fotsiny.
Manaiky aho ... Mihevitra aho fa amin'izany dia mihatsara kokoa ny QT ..
@ Juanra20 «… adala ……. Hampiasa Gambas amin'ny Windows fotsiny»
Tsy "irery" ny mampiasa Gambas, araka ny nolazaiko tao amin'ny lahatsoratra fa hampiasa distro gnu / linux ianao. (ubuntu, debian, Arch Linux, openuse, fedora, sns ...)
Ny newbies dia afaka mampiasa azy io amin'izay tiany, ao anatin'izany ny fianarana Linux, nefa tsy mila mikasika ny kapila mafy ataon'ny solosain'izy ireo amin'ny fizarazaran-toerana na olana amin'ny UEFI.
Fomba iray hahafantarana gnu / linux.
Virtualbox, mametraka ao anatin'ny 30 segondra.
mamono voalavo dia hoy izy:
niphosio dia hoy izy:
Mamaly an'i nifosio
Wtf? Somary bogosy ny lohateny.
Tokony ho napetrako:
«Ho an'ny Windows XP, 7 na 8: Famoronana sy fampiasana ireo milina virtoaly amin'ny VirtualBox miaraka amin'i Gnu / Linux ary Gambas3 ao amin'ny rafitra fiasa Microsoft. Fomba iray hanandramana hianatra hampiasa Gnu / Linux (ary koa Gambas3). »
Fa fohy kokoa ny mametraka azy:
"GNU / Linux sy Gambas3 mandeha amin'ny Windows"
Ary ny lohateny dia tsy "diso kely", marina izany.
fvparg dia hoy izy:
Salama, misy tolo-kevitra momba ny fampandehanana / fametrahana ny Pusarcat Linux Diego picaros ao amin'ny VirtualBox?
satria tantiko io ary tsy azoko atao ny miasa dia miafara amin'ny manipy "Kernel Panic" foana izy io ary mijanona eo.
Mamaly an'i fvparg
Amin'ny ankapobeny, ny hany zavatra tokony hitandremanao dia ny habeny tokony hatolotrao amin'ny kapila matevina virtoaly. Ny habetsaky ny habaka ambany indrindra dia 15 GB, satria io fizarana io, amin'ny alàlan'ny fitondrana programa efa napetraka marobe, dia mila an'ity toerana kely indrindra apetraka ity ary tsy manana olana ianao rehefa manomboka azy.
Ampidiro eo am-piandohana na any amin'ny faran'ny fisie ny lahatsoratra misy fehezanteny mahazatra sy mahazatra